काखी ग’न्हाएका कारण ल’ज्जित हुनुपरेको छ ? त्यसो भए अ’पनाउनुहोस् यी उपाय – eSidhakura
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यकाखी ग’न्हाएका कारण ल’ज्जित हुनुपरेको छ ? त्यसो भए अ’पनाउनुहोस् यी उपाय
काठमाडौँ । शरीरबाट दु’र्गन्ध आउनु एक यस्तो स’मस्या हो जसबाट ठुलो संख्यामा मानिसहरु पी’डित छन्। यद्यपि शरीरबाट हल्का दु’र्गन्ध आउनु विशेष गरी का’खीबाट दु’र्गन्ध आउनु खासै ठुलो कुरा भने होइन। तर यदि शरीरबाट वरपर बसेका मानिसलाई स’कस पार्ने, बे’होस होला जसरी ग’न्हाउने ग’न्ध आउँछ भने यसले आत्मविश्वास पनि कमजोर बनाउँछ।
जसका शरीरबाट दु’र्गन्ध आउँछ उनीहरुले स्वयमलाई फ्रे’श र स्मार्ट देखाउनको लागि प’रफ्युम र डे’ओडोरेन्ट बाहेक अरु केही विकल्प नै देख्दैनन्। तर तपाईलाई यो कुरा थाहा हुनु पर्छ कि प’रफ्युम र डे’ओडोरेन्टको सुगन्ध निश्चित समयपछि शरीरबाट उ’ड्छ र साथै तिनका अधिक प्रयोगले शरीरमा ए’लर्जी र अन्य थुप्रै त्व’चा सम्बन्धी रो’गहरु पनि हुन् सक्छ।
यसकारण आज हामी तपाईलाई शरीरबाट निस्केको दु’र्गन्ध ह’टाउनका लागि केही यस्ता उपायहरु बताउँदै छौं, जुन तपाईले सस्तोमा घरमै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई शरीरबाट आउने दु’र्गन्धबाट सधैंको लागि छु’टकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने कुनै महँगा उत्पादनको प्रयोग नभएर मात्र ५ रुपियाँ पर्ने चिज खरिद गर्नु पर्नेछ।
हो, तपाई सही सुन्दै हुनुहुन्छ शरीरको ग’न्ध दू’र गर्नको लागि कागती निकै अ’सरदार उपाय हो। यस यसको प्रयोगबाट तपाई शरीरको ग’न्धबाट छु’टकारा पाउन सक्नुहुन्छ। नुहाउने समयमा का’खीमा कागतीको टुक्राले हल्का-हल्का करिब १० मिनेटसम्म र’गड्नुहोला। त्यसपछि सफा पानीले पखालेर जिउ सफा गर्नुहोला।
त्यसपछि तपाईले पूरा दिनभरि आफ्नो शरीरबाट दु’र्गन्ध नआएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हरेक बिहान कागती पानी या चियामा कागती हालेर सेव’न गर्दा पनि शरीरबाट दु’र्गन्ध ह’टाउनको लागि फाइदा पुग्छ। तपाईले केवल एक हप्तामै थाहा पाउनु हुनेछ छ कि ५ रुपैयाँको कागती कति धेरै कामको चिज हो भन्ने ।
ए’प्पल सा’इ’डर भि’नेग को से’वनले पनि शरीरको दु’र्गन्ध ह’टाउन सकिन्छ। जसको शरीरबाट धेरै पसिना आउँछ, तिनले ए’प्पल सा’इड’र भि’ने’गर से’वन गर्न आवश्यक छ। यसको से’वनले शरीरको ब्या’क्टेरिया न’ष्ट हुनुको साथै कम’ पसिना आउँदछ ।
यसबाहेक तपाई पूरा दिन स्व’यमलाई ताजा महसुस गर्नुहुनेछ। चिल्लो र धेरै म’सालेदार खाना खादा पनि शरीरबाट दु’र्गन्ध आउँछ । यस प्रकारका खानेकुराहरुका से’वनलाई छा’डेर हरियो सागपात र ता’जा फलफुल से’वन गर्न सुरु गर्नुहोला। यसले तपाईको पाचन प्रणालीलाई दु’रुस्त राख्नुको साथै शरीरबाट दु’र्गन्ध आउने स’मस्या पनि ह’टाउँछ।
जुनार, एक यस्तो फल हो, जसको प्रयोगले तपाईलाई दिनभर ताजा राख्न म’द्दत गर्छ। हरेक दिन एउटा जु’नार खाने को’सिस गर्नुहोला, अत्यन्तै राम्रो म’हसुस हुनेछ। शरीरबाट दु’र्गन्ध गा’यब हुनुको साथै त्वचा सम्बन्धी सबै वि’कार ह’टाउँछ। एजेन्सी